Ny Fiainan’ny Mpiasa Mpifindra Monina Ao ‘Little Burma’ Ao Thailandy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jolay 2016 15:32 GMT
Avy amin'ny The Irrawaddy, tranokalam-baovao tsy miankina ao Myanmar ity lahatsoratr'i Nyein Nyein ity ary naverina navoaka eto amin'ny Global Voices ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Sambany nitsidika an'i Thailandy sy Mahachai ny mpitarika ny antoko mpanohitra Aung San Suu Kyi ao Myanmar tamin'ny 2012 . Fanindroany tamin'ny fitsidihany kosa ity taona ity tamin'ny volana Jona ary amin'ny maha mpanolo-tsaina ara-panjakana azy tamin'ity indray mitoraka ity no nanaovany izany rehefa nandresy tamin'ny fifidianana tamin'ny Novambra 2015 tamin'ny fandresena goavana ny antokony. Nihaona tamin'ny mpifindra-monina vitsivitsy monja ao Mahachai i Suu Kyi nandritra izany diany vao haingana izany , taorian'ny fanakanana nataon'ny manam-pahefana Thailandey ny fidiran'ity mpitarika mpiaro ny vondron'ny zon'ny mpiasa ao Myanmar sy ireo vahoaka teratany Birmana maro teo am-piandrasana azy ity.
Lasa be fihetseham-po ihany koa ireo mpiasa Birmana ao Talaat Kung, na ny tsenan'ny patsabe, rehefa miresaka momba ny fitsidihan'ilay mpanolotsainam-panjakana sy ny fanantenan'izy ireo hisian'ny asa tsara kokoa , izay nankatoavin'i Suu Kyi nandritra ny fitsidihana tao Thailandy. Tsy araka ny tokony ho izy ny karaman'izy ireo matetika izay manomboka amin'ny 200 baht Thailandey (5,72 $ Amerikana) ka hatramin'ny 300 baht (8.58 $ ) ,karama farany ambany ofisialy isan'andro ao Thailandy ilay farany io, nefa izany no matetika omena ireo mpiasa vahiny mpifindra monina .